၂၀၂၁ မှာ အသုံးများလာမယ့် “Hybrid Sales Model” - Better Version
December 23, 2020 2020-12-24 11:14
အရင်တစ်ပတ် မှာ Hubspot Global survey အကြောင်းတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီ survey မှာပါသလိုပဲ လာမယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ sales models တွေ အများကြီးထဲကနေမှ “Hybrid Sales Model” ကို အသုံးပြုမယ့် ကုမ္ပဏီတွေဟာ ၅၇% ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ “Hybrid Sales Model” ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာ ဒီနေ့ ပြောပြပေးပါ့မယ်။
🎯Hybrid Sales Model ဆိုတာဘာလဲ?
Hybrid Sales Model ဆိုတာ အလွယ်ဆုံးရှင်းပြရရင် ကုန်ထုတ်လုပ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၀န်ဆောင်မှုရောင်းချတာမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကုမ္ပဏီ ကိုယ်တိုင်က “တဆင့်ခံပြီးရောင်းသလို။ တိုက်ရိုက်လည်းရောင်းချတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။
ဥပမာ ပြောရရင် မိတ်ဆွေက beauty product တစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ် စားသောက်ကုန် တစ်ခုရောင်းတယ်ဆိုပါစို့။ အဲ့ဒီ product ၊ စားသောက်ကုန်ကို သင့်ရဲ့ Facebook page, ဖုန်း၊ အရောင်းအဖွဲ့က ရောင်းလို့ရနိုင်သလို တစ်ခြား E-commerce site တွေဖြစ်တဲ့ shop.com တို့ RGO47 တို့ ဒီလိုအစရှိတဲ့ distributors တွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ပြီး တစ်ဆင့်ခံရောင်းလို့ရတာမျိုးကို ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။
၀န်ဆောင်မှုမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပါပဲ။ သင်က Express Bus ကား ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ကားဂိတ်မှာလည်း ရောင်းလို့ရသလို Bus.com.mm လိုမျိုး၊ ရွှေစင် ကားလက်မှတ်ရောင်း၀ယ်ရေး အစရှိတဲ့ distributor တွေဆီမှာလည်းရောင်းလို့ရပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ Business သဘောတရားပေါ်မူတည်ပြီး အချို့စီးပွားရေးတွေဟာ ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သတ်တာ၊ Technical နဲ့ပတ်သတ်တာမျိုးကို တိုက်ရိုက်ကုမ္ပဏီနဲ့ ဆက်သွယ်ရပြီး ကျန်တဲ့ Logistic ပိုင်း ဆိုင်ရာကိုတော့ distribution ကုမ္ပဏီကပဲ တာ၀န်ယူသွားတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။
ဒီလို Sales model မျိုးကို ၅၇% လောက်က လာမယ့် ၂၀၂၁ မှာအသုံးပြုကျတော့မှာပါ။ အခုတောင်လုပ်ငန်းတော်တော်များများက စပြီးပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။
လာမယ့် အပတ်တွေမှာ Hybrid Sales Model ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ? မိတ်ဆွေတို့လုပ်ငန်းရဲ့ အရောင်းကို မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ Hybrid Sales model ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် ဘာတွေကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားသင့်လဲ၊ ဆိုတာ သိချင်တယ်ဆိုရင် “Better 2021” လို့သာရေးခဲ့ပါ။
#BetterVersion #MakeYourProgress #HybridSalesmodel #Better2021